लकडाउनुको आदेश पालना नगरे ६ महिना कैद, अरु के हुन्छ ?::Leading News Portal From Nepal.
लकडाउनुको आदेश पालना नगरे ६ महिना कैद, अरु के हुन्छ ?
कोराना रोगको विश्वव्यापी रूपमा फैलदै गएको छ । नेपालमा पनि थप एक जनालाई पुष्टि भएपछि सरकारले रोक थाम तथा नियन्त्रणको लागि संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार प्रकिया अघि बढाउने निर्णय लिएको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी गराए । संक्रामक ऐन २०२० को अबहेलना गर्ने वा आदेश पालना नगर्नेलाई सोहीअनुसार कारवाही गरिनेछ खतिवडाले भने ।
उपदफा २ ले संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले जसको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । त्यस्तै, उपदफा ३ ले उपदफा १ वा २ को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले पैदल वा जुनसुकै सवारीको साधनबाट लगिने वा ल्याइने सफर गर्ने यात्रुको जाचबुझ गर्ने अधिकार छ ।
जाँचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले अस्पताल तथा अन्य स्थानहरूमा अलग गरी वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान वा सफर गर्नमा समेत निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक आदेशहरू जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।